Ekupheleni kuka-2014, ifilimu entsha, i-Blood ne-Milk, yavela ezikrinini. Abalingisi abakhona kulesi sithombe, bakwazi ukushintsha kahle izintambo ze-comedy ne-melodrama, ukuze izethameli zibhekiswe kuzo zonke izintandokazi zalokho okwakwenzeka. Futhi kukhona into okumele uyibuke: kubonakala sengathi iyindaba ejwayelekile, kodwa yonke into ishintshwe phansi, yisona isizathu sezikhathi ezibelethela ukumomotheka.
Umlingisi oyinhloko wefilimu - u-Eugene - kungenziwa kalula ukuthi ummeleli wesimanje. Uhlakaniphile kakhulu, omuhle futhi uphumelele. Unomlingiswa oqinile. Kodwa ayikho injabulo ekuphileni kwakho komuntu siqu. Futhi umsebenzi wakhe awuniki ithuba lokubheka abantu ngokusebenzisa izibuko ezinemibala. Uyinhloko yomnyango wophenyo, owashiya uphawu oluhlobene nobuhlobo nabo bonke abantu abahlangana naye endleleni. Ngakho-ke, akukho zinguquko eziqondile ezingakaze zibonwe empilweni yakhe.
Abadlali befilimu "Igazi ngebisi", abadlala indima enkulu kulo, yi-Olga Fadeyeva no-Andrei Frolov (II).
Yiqiniso, amaphoyisa angathandi abalingani besifazane (ikakhulukazi ezikhundleni zobuholi). Kodwa umfazi wakwazi ukuthola ukuzwelana nokuhlonishwa kwabangaphansi kwakhe, ngokuphindaphindiwe efakazela kula madoda abalulekile ukuthi amandla akhe nokuphefumulelwa kuzohlala isikhathi eside kakhulu. Kodwa ngisho nalokhu akumsizi ukuba ahlele impilo yakhe emva kokuhlukaniswa nomyeni wakhe. Futhi ingabe kukhona okuzoshintsha uma uZhenya ngokwakhe enquma ukudonga udonga oluphakeme kubo bonke abantu, kunokuzama ukuvula ubuhlobo obusha?
I-Storyline. Isiqingatha sesibili
Cishe isimo esifanayo ekuphileni komunye u-protagonist wefilimu - uConstantine. Yena, ngokungafani noZhenya, uhlala emzaneni omncane. Umsebenti wakhe ungase ubonakale uyinqaba: u-milkmaid epulazini lendawo. Mhlawumbe, uyobe enenhlanhla ukuthola owesifazane wamaphupho akhe nokwakha umndeni, ubuhle kuphela abuphuthumanga endlini yakhe. Abesifazane abafuni ukwakha ubudlelwane nomsebenzi ojwayelekile osebenza kusukela ekuseni kuze kuhlwe ukuze athole ama-ruble ayizinkulungwane ezimbalwa kuphela. Futhi abashadile abangahle bafuna ukunakekelwa okuningi futhi umholo womlingani ophakeme.
Izenzakalo ezinjalo zandulela ukuqala kwezindaba zothando kuleli filimu "Igazi ngebisi." Abadlali abadubulayo, bakwazi ukudala iqembu labantu abafana nomqondo, oye wahamba ukuze kuzuze isithombe.
Kwabonakala sengathi akukho okungahle kwenzeke okwakungenza abantu abanjalo bahluke komunye nomunye. Nakuba benesizungu futhi bejabule. Kodwa ...
Ngolunye usuku bahlangane "ngosuku oluyimpumputhe". Futhi konke kwaqala. Umnumzane onamandla angadidekile futhi engesabiswanga yizimpikiswano nezinsuku zakhe zokusebenza, u-Eugene unquma ukungamtsheli iqiniso ngenkonzo yakhe. Ngakho-ke, uthi usebenza njengomfundisi enkulisa.
U-Kostya ufuna ukuba nombono omuhle omaziyo omusha, ngakho ubonakala sengathi usomabhizinisi ocebile kakhulu, ofuna ingxenye yakhe yesibili.
Mhlawumbe lokhu kwakuyoba umhlangano wabo wokuqala nowokugcina, futhi babengenakubonana kunanini ngaphambili. Kodwa ukukhohlisa kwabo okungenangqondo kubandakanya izigameko nokuphikisana. Manje uGenet noKostya kufanele baqambe amanga ngaso sonke isikhathi, nsuku zonke bangene ezimweni ezingathandeki kubo bobabili.
Lapha izenzakalo ezinjalo zivela kule filimu "Igazi ngebisi. Abadlali, abaqashiwe nabo - uVladislav Dunaev, uMikhail Vladimirov, u-Ilya Korobko, u- Yana Krainova , badlala indima yabo ngesithunzi, bakha uhlaka oluhle lomlando wabalingiswa abakhulu.
Imidwebo ngemva kokubuka
Umlingisi oyinhloko ungabizwa ngokuthi uLyudmila Prokofievna wesimanje. Kodwa kunguqulo entsha. Wayesevele eqhubekile kulo msebenzi, wayeshadile, kodwa akaphumelelanga. Kodwa ngomsebenzi we-protagonist, konke kubheka okungenangqondo: i-milkmaid yesilisa. Okungajwayelekile. Kodwa yilokho okwakulungisiwe kule filimu "Igazi ngebisi." Abadlali bazama ukubonisa umehluko ezithakazelweni, isimo senhlalo sabalingiswa. Futhi yini engawahlanganisa?
Ekuboneni kokuqala, banjengabantu abavela kumaplanethi ahlukene. Kodwa lapha kudlalwa ukuzijabulisa kwanamuhla - izinsuku ezinjalo eziyimpumputhe. Ngalokhu, konke kuqala.
Kungani bekungabaza ukuthi bangubani ngempela, akucaci kahle, kodwa ke konke kwaphenduka njenge-snowball.
Kuhle ukuthi abadlali abaziwa (ngaphandle kwabalingisi abakhulu), okuthakazelisayo kakhulu ukubuka umdlalo wabo, ngaphandle kokuphazanyiswa izinhlamvu ezibonwe ngaphambili.
Yileyo ndlela ayekhipha ngayo - ifilimu ethi "Igazi ngebisi." Abadlali nezindima ezidlalwa ngabo kulesi sithombe, bazama ukuveza umbukeli iqiniso elilula: okumele kube yiwe futhi konke kuzovela.
Indlela mncane Victoria Lopyreva. Umlando mpi ngokumelene ukukhuluphala